The documents appearing under the A-Z index are meant only for use inside the Ministry of Health and Sports and registered general practitioners of Myanmar. The main purpose is to promote experience and knowledge sharing within the boundaries of the Ministry of Health and Sports. It is not recommended to be quoted or referenced when communications are made outside the domain of the Ministry of Health and Sports.
"ကူးစက်ရောဂါကင်းဝေးဖို့၊ စနစ်တကျလက်ဆေးကြပါစို့" (6-11-2020)
"ဆန္ဒမဲပေးအပြီး လက်သန်းမင်တို့ရာတွင် သတိပြုလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် အချက်များ" (6-11-2020)
"တစ်ဦးကို တစ်ဦး အသိပေးခြင်း / သတိပေးခြင်း မိသားစုစီမံချက် ” ဆောင်ရွက်လျက်ရှိခြင်းကို အသိပေးခြင်း (19-1-2021)
(COVID-19)ကာလတွင် လူခန္ဓာကိုယ်အား တိုက်ရိုက်ဆေးဖျန်းခြင်းနှင့် အလုံခန်းငယ်များကို အသုံးပြု၍ ပိုးသန့်စင်ခြင်းအတွက် သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ခြင်း (Version 1.0) (19-5-2020)
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးအသိပညာများနှင့် လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်များ
C: Increasing the Effectiveness of Capacity Building Activities (from the book of Reflections ofaPublic Health Professional - Vol.1 by Dr. Myint Htwe)
C: Strengthening International Health Coordination (from the book of Reflections ofaPublic Health Professional - Vol.1 by Dr. Myint Htwe)
Ca Cervix: သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ အကြိုအဆင့်ကို စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ကုသခြင်းဆိုင်ရာလမ်းညွှန်
Cabin Announcement for Prevention of Coronavirus (COVID-19) - လေယာဉ်ပေါ်တွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ (COVID-19) ကာကွယ်ရေး အသိပေးပြောကြားချက် (25-2-2020)
Carcinoma: Clinical Study of Carcinoma of Pancreas
Cardiac Catheterization: Transcatheter Intervention services in YKCH
Cardiovascular Disease: နှလုံးသွေးကြောရောဂါများအကြောင်း သိကောင်းစရာ
Cardiovascular System: Curriculum Development Project for CVS Module
Case management of COVID-19 Disease at District/Township hospitals without an ICU (Version 1) (26-3-2020)
CDSR: Policy Brief on Child Death Surveillance and Response
CDSR: Review/Assessment of Implementation of Child Death Surveillance and Response in Myanmar
Cerebral Palsy: HIP DISPLACEMENT IN CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY
Cervix: အိတ်ချ်ပီဗီ (Human Papillomavirus Vaccine – HPV) ပိုးနှင့် အိတ်ချ်ပီဗီပိုးကြောင့် ဖြစ်ပွားသော သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာအကြောင်း သိကောင်းစရာများ (20-10-2020)
Child: The Effect of Ketamine on the Incidence and Severity Of Emergence Agitation in Children
Child: Assessing and Treating the Very Sick Child
Child: Life Support Infants and Children
Child: မွေးကင်းစနှင့်ကလေး ကျန်းမာဖွံ့ဖြိုးရေး
Chlorination: Disinfection of Drinking Water with Chlorine
Chronic Kidney Disease: Role of Active Vitamin D in CKD
CKD MANAGEMENT In TERTIARY CENTER
CKD: Chronic Kidney Disease (Prevention)
CKD: MANAGEMENT OF CHRONIC KIDNEY DISEASE IN SECONDARY LEVEL
CKD: MANAGEMENT OF CKD AT PRIMARY LEVEL
Clinical Learning Experience: Time to Rethink and Reshape
Clinical Management Guideline for COVID-19 Infection in Pregnancy (Version 2) (9-4-2020)
Clinical Management Guidelines for COVID-19 Acute Respiratory Disease (Version 4) (26-3-2020)
Clinical Management Guidelines for COVID-19 Acute Respiratory Disease (Version 8) (25-8-2020)
Clinical: EARLY CLINICAL EXPOSURE
Clinical: Teaching Clinical Competence Today to Doctors of Tomorrow
Coma: An Approach to Coma
Communication for disasters: Risk and Crisis Communication For Disasters
Communication: Effective Use of Communication Strategies in Hospital Care
Communication: Strategic Communications
Communication: Writingacommunications strategy
Community Engagement Approach : Manual for Basic Health Staff (2018)
Community Engagement Approach : ရပ်ရွာလူထု အခြေပြုလက်တွဲဆောင်ရွက်မှု ချဉ်းကပ်နည်း (2018)
Community Engagement Manual_World Bank
Community Engagement Planning Framework (English)_World Bank
Community Engagement Planning Framework (Myanmar)_World Bank
COPD: Going Beyond The Lungs
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Situation Reports (Myanmar)
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ဖြစ်ပွားနေစဉ်ကာလအတွင်း ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများမှထွက်ရှိသော စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို စနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲခြင်း လုပ်ငန်းလမ်းညွှန် (Version 1.0) (7-4-2020)
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ဖြစ်ပွားနေစဉ်ကာလအတွင်း အများပြည်သူနှင့်သက်ဆိုင်သော နေရာများတွင် ပိုးသတ်သန့်စင်ခြင်းဆိုင်ရာ သိကောင်းစရာများ (Version 2.0) (2-6-2020)
Coronavirus Disease 2019(COVID-19) ဖြစ်ပွားနေစဉ်ကာလအတွင်း အများပြည်သူနှင့်သက်ဆိုင်သောနေရာများတွင် ပိုးသတ်သန့်စင်ခြင်းဆိုင်ရာ သိကောင်းစရာများ (Version 1.1) (6-4-2020)
COVID- 19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်နေသည့်ကာလအတွင်း သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့် နာတာရှည်ရောဂါ ရှိသူများအတွက် လုပ်ငန်းလမ်းညွှန် (Version - 1.0) (6-4-2020)
COVID 19: Supplementary Recommendations for Safe Surgery in COVID 19 Pandemic Era (Version 01.1) (26-10-2020)
COVID-19 Acute Respiratory Disease နှင့် ပတ်သက်၍ Personal Protective Equipment ဝတ်ဆင်ရန် လုပ်ငန်းလမ်းညွှန် (Version 2) (1-7-2020)
COVID-19 Guidelines for Community Fever Clinic Version 01-2020 (22-4-2020)
COVID-19 IECs in Kachin Language (18-2-2020)
COVID-19 IECs in Shan Language (17-2-2020)
COVID-19 Radio Messages (AM/FM) in Ethnic Languages (21-2-2020)
COVID-19 RDT Antigen ဖြင့် ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးရာတွင် လိုက်နာရမည့် ဇီဝလုံခြုံမှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းလမ်းညွှန် (Version 01)
COVID-19 Situation Report 1 (4-4-2020)
COVID-19 Situation Report 199 (23-10-2020)
COVID-19 Situation Report2(5-4-2020)
COVID-19 Situation Report 200 (24-10-2020)
COVID-19 Situation Report 201 (25-10-2020)
COVID-19 Situation Report 202 (26-10-2020)
COVID-19 Situation Report 203 (27-10-2020)
COVID-19 Situation Report 204 (28-10-2020)
COVID-19 Situation Report 205 (29-10-2020)
COVID-19 Situation Report 206 (30-10-2020)
COVID-19 Situation Report 207 (31-10-2020)
COVID-19 Situation Report 208 (1-11-2020)
COVID-19 Situation Report 209 (2-11-2020)
COVID-19 Situation Report 210 (3-11-2020)
COVID-19 Situation Report 211 (4-11-2020)
COVID-19 Situation Report 212 (5-11-2020)
COVID-19 Situation Report 213 (6-11-2020)
COVID-19 Situation Report 214 (7-11-2020)
COVID-19 Situation Report 215 (8-11-2020)
COVID-19 Situation Report 216 (9-11-2020)
COVID-19 Situation Report 217 (10-11-2020)
COVID-19 Situation Report 218 (11-11-2020)
COVID-19 Situation Report 219 (12-11-2020)
COVID-19 Situation Report 220 (13-11-2020)
COVID-19 Situation Report 221 (14-11-2020)
COVID-19 Situation Report 222 (15-11-2020)
COVID-19 Situation Report 223 (16-11-2020)
COVID-19 Situation Report 224 (17-11-2020)
COVID-19 Situation Report 225 (18-11-2020)
COVID-19 Situation Report 226 (19-11-2020)
COVID-19 Situation Report 227 (20-11-2020)
COVID-19 Situation Report 228 (21-11-2020)
COVID-19 Situation Report 229 (22-11-2020)
COVID-19 Situation Report 230 (23-11-2020)
COVID-19 Situation Report 231 (24-11-2020)
COVID-19 Situation Report 232 (25-11-2020)
COVID-19 Situation Report 233 (26-11-2020)
COVID-19 Situation Report 234 (27-11-2020)
COVID-19 Situation Report 235 (28-11-2020)
COVID-19 Situation Report 236 (29-11-2020)
COVID-19 Situation Report 237 (30-11-2020)
COVID-19 Situation Report 238 (1-12-2020)
COVID-19 Situation Report 239 (2-12-2020)
COVID-19 Situation Report 240 (3-12-2020)
COVID-19 Situation Report 241 (4-12-2020)
COVID-19 Situation Report 242 (5-12-2020)
COVID-19 Situation Report 243 (6-12-2020)
COVID-19 Situation Report 244 (7-12-2020)
COVID-19 Situation Report 245 (8-12-2020)
COVID-19 Situation Report 246 (9-12-2020)
COVID-19 Situation Report 247 (10-12-2020)
COVID-19 Situation Report 248 (11-12-2020)
COVID-19 Situation Report 249 (12-12-2020)
COVID-19 Situation Report 250 (13-12-2020)
COVID-19 Situation Report 251 (14-12-2020)
COVID-19 Situation Report 252 (15-12-2020)
COVID-19 Situation Report 253 (16-12-2020)
COVID-19 Situation Report 254 (17-12-2020)
COVID-19 Situation Report 255 (18-12-2020)
COVID-19 Situation Report 256 (19-12-2020)
COVID-19 Situation Report 257 (20-12-2020)
COVID-19 Situation Report 258 (21-12-2020)
COVID-19 Situation Report 259 (22-12-2020)
COVID-19 Situation Report 260 (23-12-2020)
COVID-19 Situation Report 261 (24-12-2020)
COVID-19 Situation Report 262 (25-12-2020)
COVID-19 Situation Report3(7-4-2020)
COVID-19 ကာကွယ်နိုင်ရန် ကျန်းမာရေးအသိပညာအချက်အလက်များ (တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားများ) (24-4-2020)
COVID-19 ကာကွယ်ရေး တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားများဖြင့် အသံလွှင့်ချက်များ (6-4-2020)
COVID-19 ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါကို ထိရောက်စွာကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရန် စည်းကမ်းမဲ့ တံတွေးသလိပ်ထွေးခြင်းနှင့် ကွမ်းတံတွေးထွေးခြင်းတို့ကို လုံးဝ(လုံးဝ)ရှောင်ကြဉ်ပါ
COVID-19 ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ် (10-11-2020)
COVID-19 ဖြစ်ပွားစဉ်ကာလအတွင်း သွေးလွန်တုပ်ကွေးကာကွယ်နှိမ်နင်းရေး လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုက်နာရမည့် စံကိုက်လုပ်ငန်းလမ်းညွှန် (May 2020)
COVID-19 မိမိကစ ကာကွယ်ပါ ( ကချင် ဘာသာ - ၅ မျိုး) (29-4-2020)
COVID-19 မိမိကစ ကာကွယ်ပါ ( ရှမ်း ဘာသာ - ၂ မျိုး) (29-4-2020)
COVID-19 မိမိကစ ကာကွယ်ပါ၊ Kayan Language (31-3-2020)
COVID-19 မိမိကစ ကာကွယ်ပါ။ "လားဟူဘာသာ" (5-4-2020)
COVID-19 မိမိကစ ကာကွယ်ပါ။ "အခါဘာသာ" (2-4-2020)
COVID-19 မိမိကစကာကွယ်ပါ (ပိုးကရင်ဘာသာ) (6-4-2020)
COVID-19 ရောဂါ ထိရောက်စွာ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရန် မြို့နယ်/ရပ်ကွက်/ ကျေးရွာအတွင်းတွင် အိမ်ဆိုင်များနှင့် လမ်းဘေးစျေးဆိုင်များ တိကျစွာလိုက်နာရမည့် အချက်များ
COVID-19 ရောဂါ နှင့် ပတ်သက်၍ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များ၊ နို့တိုက်မိခင်များ၊ ရင်သွေးငယ်များ၏မိဘများနှင့် အာဟာရဆိုင်ရာ အမေးများသည့် မေးခွန်းများနှင့်အဖြေများ (Version 1.0) (11-5-2020)
COVID-19 ရောဂါ နှင့်ပတ်သက်၍ ဆေးရုံများတွင် ရောဂါကူးစက်မှုကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး လုပ်ငန်းလမ်းညွှန် (Version 4) (1-7-2020)
COVID-19 ရောဂါ ဖြစ်ပွားနေစဉ်ကာလအတွင်း အများပြည်သူသုံး ယာဉ်ကြီး၊ ယာဉ်ငယ်နှင့် အဝေးပြေးကားဂိတ်များတွင် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်များ (Version 1.0) (11-5-2020)
COVID-19 ရောဂါ မိမိကစကာကွယ်ပါ (Chinese Language) (6-4-2020)
COVID-19 ရောဂါ မိမိကစကာကွယ်ပါ (ပအိုဝ်းဘာသာ) (6-4-2020)
COVID-19 ရောဂါ သံသယလူနာများနှင့် ရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူ လူနာများအား လူနာတင်ယာဉ်ဖြင့် လွှဲပြောင်းပေးပို့ရာတွင် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် လုပ်ငန်းလမ်းညွှန် (Version 1.0) (11-5-2020)
COVID-19 ရောဂါ သံသယလူနာများနှင့် ရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူလူနာများအား လူနာတင်ယာဉ်ဖြင့် လွှဲပြောင်းပေးပို့ရာတွင် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် လုပ်ငန်းလမ်းညွှန် (Version 1) (7-5-2020)
COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ရန် မြို့နယ်၊ရပ်ကွက်နှင့် ကျေးရွာအတွင်းရှိ ဈေးဆိုင်များ၊ ဈေးများ၊ ဈေးဝယ်သူများနှင့် ဈေးကြီးကြပ်ရေးကော်မတီများ လိုက်နာရမည့်အချက်များ (Version1.0) (21-4-2020)
COVID-19 ရောဂါကူးစက်ပျံ့ပွားမှုကာလအတွင်း စိတ်ကျန်းမာရေးနှင့် စိတ်ပိုင်း၊ လူမှုရေးပိုင်းဆိုင်ရာတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကျန်းမာရေးလုပ်သား/ ဝန်ထမ်းများအတွက် သတင်းစကားများ (Version 1.0) (11-5-2020)
COVID-19 ရောဂါကူးစက်ပျံ့ပွားမှုကာလအတွင်း စိတ်ကျန်းမာရေးနှင့် စိတ်ပိုင်း၊ လူမှုရေးပိုင်းဆိုင်ရာတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကျန်းမာရေးအတွက်ဆောင်ရွက်နေသော အဖွဲ့များ၏ခေါင်းဆောင်များနှင့် မန်နေဂျာများအတွက် သတင်းစကား (Version 1.0) (11-5-2020)
COVID-19 ရောဂါကူးစက်ပျံ့ပွားမှုကာလအတွင်း စိတ်ကျန်းမာရေးနှင့် စိတ်ပိုင်း၊ လူမှုရေးပိုင်းဆိုင်ရာတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကလေးမိဘများနှင့် ကလေးများကို စောင့်ရှောက်နေသူများအတွက် သတင်းစကားများ (Version 1.0) (11-5-2020)
COVID-19 ရောဂါကူးစက်ပျံ့ပွားမှုကာလအတွင်း စိတ်ကျန်းမာရေးနှင့် စိတ်ပိုင်း၊ လူမှုရေးပိုင်းဆိုင်ရာတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြည်သူများအတွက် သတင်းစကားများ (Version 1.0) (11-5-2020)
COVID-19 ရောဂါကူးစက်ပျံ့ပွားမှုကာလအတွင်း စိတ်ကျန်းမာရေးနှင့် စိတ်ပိုင်း၊ လူမှုရေးပိုင်းဆိုင်ရာတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အသက် (၆၀) နှစ်နှင့် အထက်၊ ပင်ကိုယ်ရောဂါ ရှိနေသူများနှင့် ထိုသူများကို စောင့်ရှောက်သူများအတွက် သတင်းစကားများ (Version 1.0)
COVID-19 ရောဂါကူးစက်ပျံ့ပွားမှုကာလအတွင်း စိတ်ကျန်းမာရေးနှင့် စိတ်ပိုင်း၊ လူမှုရေးပိုင်းဆိုင်ရာတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အသွားအလာကန့်သတ် စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်း ခံထားရသူများအတွက် သတင်းစကားများ (Version 1.0) (11-5-2020)
COVID-19 ရောဂါဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးပညာပေး Animation GIF ဖိုင်များ (10-6-2020)
COVID-19 ရောဂါဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးပညာပေး Animation GIF ဖိုင်များ (12-5-2020)
COVID-19 ရောဂါဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးပညာပေး Animation GIF ဖိုင်များ (15-6-2020)
COVID-19 ရောဂါထိရောက်စွာကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရန် မြို့နယ်/ရပ်ကွက်/ ကျေးရွာအတွင်းတွင်စျေးဝယ်သူများ/အိမ်ဆိုင်များ/စျေးဆိုင်များ/ဈေးများနှင့် စျေးကြီးကြပ်ရေးကော်မတီများ တိကျစွာလိုက်နာရမည့်အချက်များ (Version 3.1) (5-1-2021)
COVID-19 ရောဂါနှင့်ပတ်သက်၍ ဆေးရုံများတွင် ရောဂါကူးစက်မှု ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး လုပ်ငန်းလမ်းညွှန် (26-3-2020)
COVID-19 ရောဂါနှင့်ပတ်သက်၍ ဆေးရုံများတွင် ရောဂါကူးစက်မှုကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး လုပ်ငန်းလမ်းညွှန် (Version 2) (18-3-2020)
COVID-19 ရောဂါနှင့်ပတ်သက်၍ ပြည်သူ့ဆေးရုံများ၌ ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ရန် Checklists (1-7-2020)
COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားစဉ်ကာလ မိမိနေအိမ်တွင် နေထိုင်စဉ်အတွင်း ကျန်းမာစွာနေထိုင်နိုင်ရေး (Healthy Stay at Home) အတွက် လိုက်နာဆောင်ရွက်သင့်သည့်အချက်များ (Version 1.1) (19-4-2020)
COVID-19 လတ်တလောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါလက္ခဏာစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းလုပ်ငန်းလမ်းညွှန် (Version -1)(24-3-2020)
COVID-19 လူနာများ ဆေးရုံဆင်းရန် သတ်မှတ်ချက်များ (Discharge Criteria Version - 5) (20-9-2020)
COVID-19: Coronavirus Disease 2019 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများ၊ လုပ်ငန်းခွင်များနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်များသို့ လမ်းညွှန်ချက် (Version 2.0) (30-3-2020)
COVID-19: Facility Quarantine (၂၁)ရက်နှင့် မိမိနေအိမ်တွင် သီးခြားနေထိုင်ခြင်း Home Quarantine ကာလ(၇)ရက် ဆောင်ရွက်သွားရေး လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် အသိပေးထုတ်ပြန်ခြင်း (11-4-2020)
COVID-19: ပြည်သူများ လုံးဝ (လုံးဝ) မပေါ့ဆကြပါနှင့်
COVID-19: "ဘေးကင်းလုံခြုံစွာမဲပေးပါ" (6-10-2020) (ပိုစတာ)
COVID-19: "ဘေးကင်းလုံခြုံစွာမဲပေးပါ" (6-10-2020) (လက်ကမ်းစာစောင်)
COVID-19: (၁၁-၂-၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန COVID-19 ရောဂါဆိုင်ရာ ဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေး (၁၅/၂၀၂၀) တွင် ညွန်ကြားခဲ့သည့် ပြည်သူလူထုအတွင်း ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးခြင်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များ
COVID-19: “မျက်နှာနှင့် နှာခေါင်းစည်း မဖြစ်မနေတပ်ဆင်ရေး လူထုလှုပ်ရှားမှုစီမံချက်” (18-11-2020)
COVID-19: 2019 Novel Corona Virus (2019-nCoV) အဆုတ်ရောင်ရောဂါ မိမိကစ၍ကာကွယ်ပါ (၄-၂-၂၀၂၀) (Billboard)
COVID-19: 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) အဆုတ်ရောင်ရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သိကောင်းစရာများ (၂၆-၁-၂၀၂၀)
COVID-19: 2019-nCoV လတ်တလောအသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ ဖြစ်ပွားသောဒေသမှ ပြန်လာသူများ၏ အတူနေမိသားစုဝင်များ လိုက်နာရန် (7-2-2020)
COVID-19: Biosafety & Biosecurity Protective Procedures for Mekong Basin Cross-border (Dec 2019)
COVID-19: Clinical Management Guidlines for COVID-19 Acute Respiratory Disease (Version 6) (14-4-2020)
COVID-19: Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ စက်ရုံအလုပ်ရုံများသို့ လမ်းညွှန်ချက် (19-3-2020)
COVID-19: COVID-19 ကာကွယ်ဖို့ မောင်တို့မယ်တို့ လိုက်နာစို့ (24-3-2020)
COVID-19: COVID-19 ဆပ်ပြာနှင့် ရေ ကို အသုံးပြု လက်ဆေးခြင်းဖြင့် ကာကွယ်ပါ (24-3-2020)
COVID-19: COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးနှိုးဆော်ချက်များ (စကောကရင် ဘာသာ) (24-3-2020)
COVID-19: COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးနှိုးဆော်ချက်များ (တီးတိန် ဘာသာ) (24-3-2020)
COVID-19: COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးနှိုးဆော်ချက်များ (ပိုးကရင် ဘာသာ) (24-3-2020)
COVID-19: Decontamination & Disinfection Procedure (1-2-2020)
COVID-19: Discharge Criteria for COVID-19 (14-2-2020)
COVID-19: EIM_Rx for Health_ Staying Active During Coronavirus Pandemic
COVID-19: Guideline for Home Quarantine အသွားအလာကန့်သတ်ခြင်းခံရပြီး မိမိအိမ်တွင်သာ နေထိုင်ရမည့်သူများအတွက် လမ်းညွှန်ချက်များ (အနှစ်ချုပ်) (26-3-2020)
COVID-19: Guideline on Utilization of Operation Theatre during COVID-19 Pandemic (June, 2020)
COVID-19: Health Advice for Travellers (26-1-2020)
COVID-19: Health Declaration Card (26-2-2020)
COVID-19: Health Education Posters & Traveller Advice in Chinese Language (7-2-2020)
COVID-19: Health Warning and Awareness on Bus and Airplanes before Departure (17-2-2020)
COVID-19: ICU Management Guideline of Acute Hypoxemic Respiratory Failure and ARDS when COVID-19 Infection is suspected (Version 3) (24-6-2020)
COVID-19: Infection Prevention and Control in ICU when COVID-19 is Suspected (Version 3) (24-6-2020)
COVID-19: Infrared (Non-touch) အပူချိန်တိုင်းကိရိယာကို အသုံးပြု၍ အပူချိန်တိုင်းတာခြင်းလမ်းညွှန် (4-5-2020)
COVID-19: Laboratory Guidelines
COVID-19: Management Protocol for COVID-19 Acute Respiratory Disease (Version 02) (14-2-2020)
COVID-19: Management Protocol for COVID-19 Acute Respiratory Disease (Version 03) (6-3-2020)
COVID-19: Novel Coronavirus (2019-nCoV) အဆုတ်ရောင်ရောဂါ ကာကွယ်နိုင်ရန် ပါးစပ်နှင့် နှာခေါင်းစည်း (Mask) ကို အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များ (3-2-2020)
COVID-19: Pediatric Clinical Management Guidlines for COVID-19 Acute Respiratory Disease (Version 2) (6-4-2020)
COVID-19: Poster for Hotel, Tourism & Travellers Version 1.2 - ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းရှင်များအတွက် ကျန်းမာရေးအသိပညာပေး ပိုစတာ (3-2-2020)
COVID-19: Quarantine ကာလ (၂၁) ရက် ပြည့်ပြီးနောက် ပိုမိုစိတ်ချရစေရန် နောက်ထပ် (၇) ရက်အတွင်း ဖော်ပြပါအချက်တွေကို သေသေချာချာလိုက်နာပါ။
COVID-19: Questions and Answers (Q & A) (17-2-2020)
COVID-19: School Health Guidelines to Prevent COVID-19
COVID-19: Situation Report 30 (7-5-2020)
COVID-19: Situation Report 31 (8-5-2020)
COVID-19: Situation Report 10 (15-4-2020)
COVID-19: Situation Report 100 (16-7-2020)
COVID-19: Situation Report 103 (19-7-2020)
COVID-19: Situation Report 104 (20-7-2020)
COVID-19: Situation Report 105 (21-7-2020)
COVID-19: Situation Report 106 (22-7-2020)
COVID-19: Situation Report 107 (23-7-2020)
COVID-19: Situation Report 11 (16-4-2020)
COVID-19: Situation Report 110 (26-7-2020)
COVID-19: Situation Report 111 (27-7-2020)
COVID-19: Situation Report 112 (28-7-2020)
COVID-19: Situation Report 116 (1-8-2020)
COVID-19: Situation Report 117 (2-8-2020)
COVID-19: Situation Report 118 (3-8-2020)
COVID-19: Situation Report 119 (4-8-2020)
COVID-19: Situation Report 12 (18-4-2020)
COVID-19: Situation Report 120 (5-8-2020)
COVID-19: Situation Report 121 (6-8-2020)
COVID-19: Situation Report 122 (7-8-2020)
COVID-19: Situation Report 123 (8-8-2020)
COVID-19: Situation Report 124 (9-8-2020)
COVID-19: Situation Report 125 (10-8-2020)
COVID-19: Situation Report 126 (11-8-2020)
COVID-19: Situation Report 127 (12-8-2020)
COVID-19: Situation Report 13 (19-4-2020)
COVID-19: Situation Report 130 (15-8-2020)
COVID-19: Situation Report 131 (16-8-2020)
COVID-19: Situation Report 132 (17-8-2020)
COVID-19: Situation Report 134 (19-8-2020)
COVID-19: Situation Report 136 (21-8-2020)
COVID-19: Situation Report 137 (22-8-2020)
COVID-19: Situation Report 138 (23-8-2020)
COVID-19: Situation Report 139 (24-8-2020)
COVID-19: Situation Report 14 (20-4-2020)
COVID-19: Situation Report 140 (25-8-2020)
COVID-19: Situation Report 141 (26-8-2020)
COVID-19: Situation Report 142 (27-8-2020)
COVID-19: Situation Report 143 (28-8-2020)
COVID-19: Situation Report 144 (29-8-2020)
COVID-19: Situation Report 146 (31-8-2020)
COVID-19: Situation Report 147 (1-9-2020)
COVID-19: Situation Report 148 (2-9-2020)
COVID-19: Situation Report 149 (3-9-2020)
COVID-19: Situation Report 15 (21-4-2020)
COVID-19: Situation Report 150 (4-9-2020)
COVID-19: Situation Report 151 (5-9-2020)
COVID-19: Situation Report 152 (6-9-2020)
COVID-19: Situation Report 153 (7-9-2020)
COVID-19: Situation Report 155 (9-9-2020)
COVID-19: Situation Report 156 (10-9-2020)
COVID-19: Situation Report 157 (11-9-2020)
COVID-19: Situation Report 158 (12-9-2020)
COVID-19: Situation Report 159 (13-9-2020)
COVID-19: Situation Report 16 (22-4-2020)
COVID-19: Situation Report 165 (19-9-2020)
COVID-19: Situation Report 166 (20-9-2020)
COVID-19: Situation Report 168 (22-9-2020)
COVID-19: Situation Report 169 (23-9-2020)
COVID-19: Situation Report 17 (23-4-2020)
COVID-19: Situation Report 170 (24-9-2020)
COVID-19: Situation Report 171 (25-9-2020)
COVID-19: Situation Report 172 (26-9-2020)
COVID-19: Situation Report 173 (27-9-2020)
COVID-19: Situation Report 174 (28-9-2020)
COVID-19: Situation Report 175 (29-9-2020)
COVID-19: Situation Report 176 (30-9-2020)
COVID-19: Situation Report 177 (1-10-2020)
COVID-19: Situation Report 178 (2-10-2020)
COVID-19: Situation Report 179 (3-10-2020)
COVID-19: Situation Report 18 (24-4-2020)
COVID-19: Situation Report 180 (4-10-2020)
COVID-19: Situation Report 182 (6-10-2020)
COVID-19: Situation Report 183 (7-10-2020)
COVID-19: Situation Report 184 (8-10-2020)
COVID-19: Situation Report 185 (9-10-2020)
COVID-19: Situation Report 186 (10-10-2020)
COVID-19: Situation Report 187 (11-10-2020)
COVID-19: Situation Report 188 (12-10-2020)
COVID-19: Situation Report 189 (13-10-2020)
COVID-19: Situation Report 19 (25-4-2020)
COVID-19: Situation Report 190 (14-10-2020)
COVID-19: Situation Report 191 (15-10-2020)
COVID-19: Situation Report 192 (16-10-2020)
COVID-19: Situation Report 193 (17-10-2020)
COVID-19: Situation Report 194 (18-10-2020)
COVID-19: Situation Report 195 (19-10-2020)
COVID-19: Situation Report 196 (20-10-2020)
COVID-19: Situation Report 197 (21-10-2020)
COVID-19: Situation Report 20 (26-4-2020)
COVID-19: Situation Report 21 (28-4-2020)
COVID-19: Situation Report 22 (29-4-2020)
COVID-19: Situation Report 23 (30-4-2020)
COVID-19: Situation Report 24 (1-5-2020)
COVID-19: Situation Report 25 (2-5-2020)
COVID-19: Situation Report 27 (4-5-2020)
COVID-19: Situation Report 28 (5-5-2020)
COVID-19: Situation Report 32 (9-5-2020)
COVID-19: Situation Report 33 (10-5-2020)
COVID-19: Situation Report 34 (11-5-2020)
COVID-19: Situation Report 35 (12-5-2020)
COVID-19: Situation Report 36 (13-5-2020)
COVID-19: Situation Report 37 (14-5-2020)
COVID-19: Situation Report 38 (15-5-2020)
COVID-19: Situation Report 39 (16-5-2020)
COVID-19: Situation Report4(9-4-2020)
COVID-19: Situation Report 40 (17-5-2020)
COVID-19: Situation Report 41 (18-5-2020)
COVID-19: Situation Report 42 (19-5-2020)
COVID-19: Situation Report 43 (20-5-2020)
COVID-19: Situation Report 44 (21-5-2020)
COVID-19: Situation Report 45 (22-5-2020)
COVID-19: Situation Report 46 (23-5-2020)
COVID-19: Situation Report 47 (24-5-2020)
COVID-19: Situation Report 48 (25-5-2020)
COVID-19: Situation Report 49 (26-5-2020)
COVID-19: Situation Report5(10-4-2020)
COVID-19: Situation Report 50 (27-5-2020)
COVID-19: Situation Report 51 (28-5-2020)
COVID-19: Situation Report 52 (29-5-2020)
COVID-19: Situation Report 53 (30-5-2020)
COVID-19: Situation Report 54 (31-5-2020)
COVID-19: Situation Report 55 (1-6-2020)
COVID-19: Situation Report 56 (2-6-2020)
COVID-19: Situation Report 57 (3-6-2020)
COVID-19: Situation Report 58 (4-6-2020)
COVID-19: Situation Report 59 (5-6-2020)
COVID-19: Situation Report6(11-4-2020)
COVID-19: Situation Report 60 (6-6-2020)
COVID-19: Situation Report 62 (8-6-2020)
COVID-19: Situation Report 63 (9-6-2020)
COVID-19: Situation Report 64 (10-6-2020)
COVID-19: Situation Report 66 (12-6-2020)
COVID-19: Situation Report 67 (13-6-2020)
COVID-19: Situation Report7(12-4-2020)
COVID-19: Situation Report 70 (16-6-2020)
COVID-19: Situation Report 71 (17-6-2020)
COVID-19: Situation Report 72 (18-6-2020)
COVID-19: Situation Report 73 (19-6-2020)
COVID-19: Situation Report 74 (20-6-2020)
COVID-19: Situation Report 75 (21-6-2020)
COVID-19: Situation Report 77 (23-6-2020)
COVID-19: Situation Report 78 (24-6-2020)
COVID-19: Situation Report 8 (13-4-2020)
COVID-19: Situation Report 81 (27-6-2020)
COVID-19: Situation Report 82 (28-6-2020)
COVID-19: Situation Report 83 (29-6-2020)
COVID-19: Situation Report 84 (30-6-2020)
COVID-19: Situation Report 85 (1-7-2020)
COVID-19: Situation Report 86 (2-7-2020)
COVID-19: Situation Report 87 (3-7-2020)
COVID-19: Situation Report9(14-4-2020)
COVID-19: Situation Report 90 (6-7-2020)
COVID-19: Situation Report 92 (8-7-2020)
COVID-19: Situation Report 94 (10-7-2020)
COVID-19: Situation Report 96 (12-7-2020)
COVID-19: Situation Report 99 (15-7-2020)
COVID-19: SOP of Pneumonia Surveillance in International Airport/Seaport, Ground Crossing and Hospitals/Clinics (18-1-2020)
COVID-19: Standard Operating Procedures for Pneumonia Surveillance (26-2-2020)
COVID-19: Sticker for Bus Version 1.2 - ဘတ်(စ်)ကားများတွင် ကပ်ထားနိုင်ရန် ကျန်းမာရေးအသိပညာပေး စတစ်ကာ (3-2-2020)
COVID-19: Traveller Advice for Wuhan Viral Pneumonia - ခရီးသွားများအတွက် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာသတိပေးချက် (7-1-2020)
COVID-19: Videos Links
COVID-19: WHO Myanmar newsletter special (4-4-2020)
COVID-19: ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအတွက် လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်များ (24-4-2020)
COVID-19: ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများ၊ လုပ်ငန်းခွင်များတွင်ဆောင်ရွက်ထားရမည့်အချက်များ (19-4-2020)
COVID-19: ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများ၊ လုပ်ငန်းခွင်များနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်များသို့ လမ်းညွှန်ချက် (Version 3.0) Updated as of (19-4-2020)
COVID-19: ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကာကွယ်ရေး မိသားစုဝင်များအချင်းချင်း အသိပေး/သတိပေး ပြောကြားရမည့်အချက်များ (6-1-2021)
COVID-19: ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကာကွယ်ရေး မိသားစုဝင်များအချင်းချင်း အသိပေး၊ သတိပေး ပြောကြားရမည့်အချက်များ (ကျန်းမာရေးအသိပညာပေး လက်ကမ်းစာစောင်)
COVID-19: ကိုရိုနာပိုင်းရပ်စ်ရောဂါ (COVID-19)နှင့်ပတ်သက်၍ အမေးများသောမေးခွန်းများနှင့်အဖြေများ (17-3-2020)
COVID-19: ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ (COVID-19) ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ရှော့ပင်းမောလ်နှင့် စူပါမားကတ်၊ ပါဆယ်ရောင်းချသည့်ဆိုင်များနှင့် အိမ်တိုင်ရာရောက် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်လုပ်ငန်းများတွင် ဆောင်ရွက်ထားရမည့်အချက်များ (Version 1.0) (4-5-2020)
COVID-19: ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ (COVID-19) ကာကွယ်ပါ ပိုစတာ (Version 1.3) (1-3-2020)
COVID-19: ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ ကာကွယ်ရေးအတွက် Hand Speaker/ Loud Speaker ကျန်းမာရေးပညာပေးအချက်အလက်များ (အမှတ်စဉ် - ၁ မှ ၁၂) (26-3-2020)
COVID-19: ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ ကာကွယ်ရေးအတွက် Hand Speaker/ Loud Speaker ကျန်းမာရေးပညာပေးအချက်အလက်များ (အမှတ်စဉ် - ၁၄) (3-4-2020)
COVID-19: ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ မိမိကစ၍ကာကွယ်ပါ (ပြည်သူများအတွက်) 10-3-2020
COVID-19: ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ မိမိကစ၍ကာကွယ်ပါ (ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းရှင်များ၊ ပြည်တွင်း/ပြည်ပ ခရီးသွားများအတွက်) 10-3-2020
COVID-19: စားသောက်ဆိုင်များ၊ ဟိုတယ်စားသောက်ခန်းမများအတွက် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းများ (24-3-2020)
COVID-19: စေတနာ့ဝန်ထမ်း သင်တန်းလက်စွဲစာအုပ် (May 2020)
COVID-19: ဆောင်းရာသီကာလ အသက်ရှုလမ်းကြောင်းရောဂါများဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးအသိပေးနှိုးဆော်ချက် (၈-၁-၂၀၂၀)
COVID-19: နှာချေ၊ ချောင်းဆိုးသည့်အခါတိုင်း လိုက်နာရမည့်ကျင့်ဝတ်များ (Cough Etiquette) (၅-၂-၂၀၂၀)
COVID-19: နေ့စဉ်ဘဝမှာ ခပ်ခွာခွာနေပါ
COVID-19: နေ့စဉ်ဘဝမှာ ခပ်ခွာခွာနေပါ (22-4-2020)
COVID-19: နေ့စဉ်ဘဝမှာ ခပ်ခွာခွာနေပါ (25-3-2020)
COVID-19: နေထိုင်မှုပုံစံသစ်များဖြင့် လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ကြိုးပမ်းကြပါစို့ (22-12-2020)
COVID-19: နေအိမ်တွင်နေထိုင်ခြင်း (Stay at Home) ကာလအတွင်း ကျန်းမာစွာနေထိုင်နိုင်ရေးအတွက် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်အချက်များ (4-5-2020)
COVID-19: ပြင်ပလူနာဌာန Out Patient Deapartment (OPD)/ အရေးပေါ်ကုသမှုဌာန (Emergency Department) COVID-19 ရောဂါအတွက် Hopital-based Fever Clinic/Fever Corner ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်မှု အားဖြည့်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး လုပ်ငန်းလမ်းညွှန် (20-4-2020)
COVID-19: ပြည်တွင်းပုံမှန်လေကြောင်းခရီးစဉ်များ ပြန်လည်ပြေးဆွဲရာတွင် လေကြောင်းလိုင်းဝန်ထမ်းများ၊ လေဆိပ်ဝန်ထမ်းများနှင့် လေယာဉ်စီးခရီးသည်များ လိုက်နာရမည့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ စံသတ်မှတ်ချက်များ (Version-2.1)
COVID-19: ပြည်သူ့ဆေးရုံများတွင် 2019-nCoV လတ်တလော အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါလူနာနှင့်ပတ်သက်၍ ဆေးရုံဆင်းလူနာများအား လမ်းညွှန်မှာကြားချက်များ (ပိုးတွေ့လူနာ) (11-2-2020)
COVID-19: ပြည်သူ့ဆေးရုံများတွင် 2019-nCoV လတ်တလော အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါလူနာနှင့်ပတ်သက်၍ ဆေးရုံဆင်းလူနာများအား လမ်းညွှန်မှာကြားချက်များ (ပိုးမတွေ့လူနာ) (11-2-2020)
COVID-19: ပြည်သူများအတွက် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် COVID-19 ရောဂါဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးများ (28-4-2020)
COVID-19: ပြည်သူလူထု၏ ဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းကူညီစောင့်ရှောက်ပေးမှုဖြင့် သတ်မှတ်နေရာ အဆောက်အဦများတွင်ထားရှိပြီး အသွားအလာကန့်သတ်ခြင်း အစီအစဉ်(Community Based Facility Quarantine) နှင့်ပတ်သက်သော လုပ်ငန်းလမ်းညွှန် (Version 1) (၂၆-၃-၂၀၂၀)
COVID-19: ပါးစပ်နှင့်နှာခေါင်းစည်း (Surgical mask) ကို စနစ်တကျ အသုံးပြုနည်း
COVID-19: ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးတွင် ရှေ့တန်းမှပါဝင်ကြသော ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းအပေါင်းတို့အား လေးစားစွာ အလေးပြုအပ်ပါသည်။
COVID-19: လတ်တလော အသက်ရှုလမ်းကြောင်းရောဂါ ကာကွယ်ဖို့ မောင်တို့မယ်တို့ လိုက်နာစို့ (7-2-2020)
COVID-19: လတ်တလောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ ဖြစ်ပွားသောဒေသမှ ပြန်လာသူများ ခွင့်သွားစဉ်/ အိမ်တွင် နေထိုင်စဉ် လိုက်နာရမည့် အချက်များ (22-3-2020)
COVID-19: လေကြောင်း၊ ရေကြောင်းနှင်နယ်စပ်ဒေသများမှတစ်ဆင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်လာသူများအတွက် COVID-19 ရောဂါနှင့်ပတ်သက်သော ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ သတိပေးအချက်အလက်များ
COVID-19: သင်နှင့် သင့်မိသားစုကျန်းမာရေး စနစ်တကျလက်ဆေးပေး (6-2-2020)
COVID-19: သတ်မှတ် Community Based Facility Quarantine Centre များ ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်များ (Version 2.0) (Updated as of 20-4-2020)
COVID-19: ဟိုတယ်/တည်းခိုခန်း (Hotel/Guest House) Quarantine Centre များ ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်များ (Version 2.0) (Updated as of 20-4-2020)
COVID-19: ဟိုတယ်နှင့် Facility Quarantine Centre များတွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ (COVID-19) ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုမှ ကာကွယ်ရန် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်များ (24-3-2020)
COVID-19: အကျဉ်းဦးစီးဌာန၊ အကျဉ်းထောင်များနှင့် အကျဉ်းစခန်းများတွင် တာဝန်ရှိသူများနှင့် အကျဉ်းကျသူများအနေဖြင့် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ (COVID-19) ကာကွယ်ရေး ဆောင်ရွက်ရမည့် အချက်များ
COVID-19: အထူးသတိပြုရမည့် ဗီဇပြောင်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် (21-12-2020)
COVID-19: အနံ့ပျောက်ခြင်းနှင့် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ
COVID-19: အဝတ်ဖြင့် ပြုလုပ်သော နှာခေါင်းစည်း (Cloth Face Covering) နှင့် ပတ်သက်၍ သိကောင်းစရာများ (15-4-2020)
COVID-19: အသက်အရွယ်ကြီးရင့်သူများအတွက် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် COVID-19 ရောဂါနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အကြံပြုချက်များ
COVID-19: အသွားအလာကန့်သတ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ် (7-9-2020)
COVID-19: အသွားအလာကန့်သတ်ထားသည့် နေရာများအား ဆန်းစစ်ကြီးကြပ်ခြင်း (Version 1.1) (၃၁-၃-၂၀၂၀)
COVID-19: အသွားအလာကန့်သတ်မှုခံယူခြင်း(၁၄)ရက်ပြည့်မြောက်ပြီးနောက် သတ်မှတ်နေရာ (Quarantine Centre) များမှ မိမိနေအိမ်များသို့ ပြန်မည့်သူများအတွက် လိုက်နာရမည့်အချက်များ (Version 1.0) (8-4-2020)
COVID-19: အသွားအလာကန့်သတ်မှုခံယူခြင်း(၂၁)ရက်ပြည့်မြောက်ပြီးနောက် သတ်မှတ်နေရာ (Quarantine Centre) များမှ မိမိနေအိမ်များသို့ ပြန်မည့်သူများအတွက် လိုက်နာရမည့်အချက်များ (Version 2.0) (11-4-2020)
COVISD-19: COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးနှိုးဆော်ချက်များ (ရခိုင် ဘာသာ) (24-3-2020)
Dengue: သွေးလွန်တုပ်ကွေးနှင့် ချီကန်ဂန်ညာရောဂါ ကာကွယ်ပါ
Diabetes: World Diabetes Day (2020)
Discharge Criteria for COVID-19 confirmed patients (as of 10-10-2020) (Version-6)
Discharge Criteria Version2(13-4-2020)
DoMS - COVID-19 clinical guidelines version5(13-4-2020)
Key Activities taken by MoHS
Management Protocol covid 19 Version5(13-4-2020)
Management Protocol for COVID-19 Acute Respiratory Disease (Version 03) (26-3-2020)
Management Protocol for COVID-19 Acute Respiratory Disease (Version 07) (28-4-2020)
Management Protocol for COVID-19 Acute Respiratory Disease (Version 6) (14-4-2020)
Management Protocol for COVID-19 Acute Respiratory Disease (Version 9) (25-8-2020)
New Yangon General Hospital COVID-19 Management Protocol (A)
New Yangon General Hospital COVID-19 Management Protocol (B)
North Okkalapa General and Teaching Hospital Standard Operating procedure Fever Clinic
School Health and COVID-19 Prevention QR code
Standard Q COVID-19 Antigen (RDT) Test ဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ် လုပ်ငန်းလမ်းညွှန် (Version-3) (10-11-2020)
Standard Q COVID-19 Antigen (RDT) Test ဖြင့်ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ် လုပ်ငန်းလမ်းညွှန် (Version - 2)
ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ (COVID-19) ဖြစ်ပွားစဉ်ကာလအတွင်း အခြေခံပညာကျောင်းများ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရာတွင် လိုက်နာရမည့်အချက်အလက်များ၊ ပညာပေးသိကောင်းစရာ အချက်အလက်များ (22-7-2020)
ကျောင်းများတွင် COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အတန်းခေါင်းဆောင်များမှ စာသင်ခန်းအတွင်း နေ့စဉ်ပြောကြားရန် အချက်အလက်များ (21-7-2020)
ကိုဗစ်-၁၉ ကာလဝယ် ကျန်းမာအောင်နေကြမယ် (၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေလ)
ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ပါးစပ်နှင့်နှာခေါင်းစည်း (Mask) ကို စနစ်တကျတပ်ဆင်၍ ကာကွယ်ပါ (V2), (၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေလ)
ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ပါးစပ်နှင့်နှာခေါင်းစည်း (Mask) စနစ်တကျတပ်ဆင်၍ ကာကွယ်ပါ (V1), (၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေလ)
ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကာကွယ်ရေး ဝန်ထမ်းနေအိမ်အခန်းများ၊ အဆောင်များတွင် လိုက်နာရန်နှင့် အချင်းချင်းအသိပေး/သတိပေးပြောကြားရမည့်အချက်များ (၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေလ)
ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အချင်းချင်း အသိပေး/သတိပေး ပြောကြားရမည့်အချက်များ (၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မတ်လ) 11-3-2021
ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက် တပ်ဆင်ရန်မသင့်လျော်သော ပါးစပ်နှင့်နှာခေါင်းစည်း (Mask) (၆) မျိုး (၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေလ)
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ (COVID-19) ကို မိမိကစ၍ကာကွယ်ပါ (5-5-2020)
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ (COVID-19) ကို မိမိကစ၍ကာကွယ်ပါ အဓိကသတင်းစကား(၁၀)ချက်(10 Key Messages) (17-4-2020)
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ (COVID-19) ဖြစ်ပွားနေစဉ်ကာလအတွင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်သင့်သည့် အာဟာရဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (Version 1.0) (5-6-2020)
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ (COVID-19) ဖြစ်ပွားမှုသေဆုံးမှုမရှိစေရေး ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသူများအနေဖြင့် မဖြစ်မနေ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် အချက်များ (24-5-2020)
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ COVID-19 ကို မိမိကစ၍ ကာကွယ်ပါ အဓိကသတင်းစကား(၁၀)ချက် (၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မတ်လ) 11-3-2021
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ COVID-19 ကူးစက်မှုမှ ကာကွယ်ရန် မပျက်မကွက် လုပ်ဆောင်ရမည့် အချက်များ (၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မတ်လ) 11-3-2021
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ရောဂါ (COVID-19) ကာကွယ်ရေးစနစ်တကျလက်ဆေးပေး
စားသောက်ဆိုင်များ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရာတွင် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်များ (Version 1.0) (18-5-2020)
ဆပ်ပြာနှင့်ရေကို အသုံးပြု၍ စက္ကန့်(၂၀) ကြာအောင်လက်ဆေးခြင်း (၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မတ်လ) 11-3-2021
‌ဆေးများ၊ ဆေးပစ္စည်းများနှင့်လိုအပ်သော ပစ္စည်းများအား ဖြန့်ဝေထားရှိမှု အခြေအနေ
ဒီနေ့အတွက် သိကောင်းစရာ (၆၄) - ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် (COVID-19) ရောဂါ ဖြစ်ပွားခဲ့ရင် ဘယ်လိုနောက်ဆက်တွဲရေရှည်ဆိုးကျိုးများ ခံစားရနိုင်ပါသလဲ?
နေ့စဉ်ဘဝမှာ ခပ်ခွာခွာနေပါ (၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မတ်လ) 11-3-2021
ပြည်သူများအတွက် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် COVID-19 ဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးအသိပညာများ (24-4-2020)
ပါးစပ်နှင့် နှာခေါင်းစည်း (Mask) စနစ်တကျဝတ်ဆင်ခြင်း (30-4-2020)
ပါးစပ်နှင့်နှာခေါင်းစည်း (Mask) ကို စနစ်တကျလုံခြုံစွာတပ်ဆင်ပါ (၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မတ်လ) 11-3-2021
ပါးစပ်နှင့်နှာခေါင်းစည်း (Mask) ကို သင့်မေးစေ့အောက်သို့ ဆွဲချထားခြင်း မပြုလုပ်ရပါ (၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေလ)
ဘာသာရေး၊ သာသနာရေးဆိုင်ရာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများ၊ စာသင်တိုက်များ၊ သီလရှင်ကျောင်းများ၊ ဝတ်ပြုကျောင်းများတွင် သီတင်းသုံးသူများ/နေထိုင်သူများနှင့် တာဝန်ရှိသူများ/အုပ်ချုပ်သူများအနေဖြင့် COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ရေး ဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်များ (Version 1.1) 12-3-2021
မြန်မာနိုင်ငံ၌ COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှု အခြေအနေအား ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း အစီရင်ခံစာများ
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသူများအတွက် COVID-19 ရောဂါနှင့် ပတ်သက်သော ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အသိပေးအချက်အလက်များ (24.4.2020)
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် အသွားအလာကန့်သတ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ် (20-9-2020)
ရုံးလုပ်ငန်းဌာနများတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကာကွယ်ရန်အတွက် ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းလမ်းညွှန် (Version 3.0) (4-12-2020)
ရုံးလုပ်ငန်းများတွင် COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ရန်အတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်နေစေရန် လုပ်ဆောင်ရမည့်နည်းလမ်းများ (Version 1.0) (2-6-2020)
လုပ်ငန်းခွင်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး လမ်းညွှန်ချက်များ
သင်ကိုယ်တိုင်နှင့် သင့်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အခြားသူများအား ကာကွယ်ရန် ပါးစပ်နှင့်နှာခေါင်းစည်း (Mask) စနစ်တကျတပ်ဆင်ပါ (၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေလ)
သတ်မှတ် Community Based Facility Quarantine Centre များ ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် အချက်များ(26-3-2020)
ဟိုတယ်/တည်းခိုခန်း (Hotel/ Guest House Quarantine Centre) များ ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်များ (Version 1.0) (26-3-2020)
အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရာတွင် COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရမည့် စံလုပ်ငန်းလမ်းညွှန် - အပိုင်း (၁) (7-9-2020)
အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရာတွင် COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရမည့် စံလုပ်ငန်းလမ်းညွှန် - အပိုင်း (၂) (9-9-2020)
အများပြည်သူအပန်းဖြေရာနေရာများ၊ ပန်းခြံများတွင်ထားရှိရမည့် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကာကွယ်ရေး သတိပြုလိုက်နာရန်အချက်များ (Version 01) (13-1-2021)
အဝေးပြေးကုန်တင်ယာဉ်မောင်း/ ယာဉ်နောက်လိုက်များအတွက် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ (COVID-19) ကာကွယ်ရေး လိုက်နာရမည့်လမ်းညွှန်ချက်များ (Version 1.0)
အသွားအလာကန့်သတ်မှုခံယူခြင်းသတ်မှတ်ရက်ပြည့်မြောက်ပြီးနောက် သတ်မှတ်နေရာ (Facility Quarantine Centre) များမှ မိမိနေအိမ်များသို့ပြန်မည့်သူများနှင့်မိသားစုဝင်များ လိုက်နာရမည့်အချက်များ (Version-3.0) (20-9-2020)